Homeबिज्ञान प्रबिधिNJ barn laborers Say amazon Jobs Are ‘hazardous, arduous’
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, स्वास्थ्य /जिबनशैली 13662
रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउन खानु`होस् यी ३ कुरा:
August 22, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 13994
बर्षायाम’मा विभिन्न रोगहरुको संक्रमण’दर उच्च हुन्छ । कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली भएका व्यक्तिहरुमा यस्ता रोगको संक्रमण छिटै हुने गर्दछ । हाम्रा सानासाना लाप’रबाहि वा गल्तीहरुले हामी’लाई रोगको संक्रम’णको जोखिम उच्च बनाएको हुन्छ । त्यसैले, रोगको संक्रमण
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय…
September 12, 2020 admin स्वास्थ्य /जिबनशैली 229690
चायाँ छाला’सम्बन्धी एक प्रकारको स’मस्या हो । टा’उकाको छालाबाट मरेका कोषहरू बाहिर निस्के’पछि त्यसलाई नै चाँया भनिन्छ । गर्मी सम’यमा भन्दाबढि जाडो सम’यमा चाँयाले धेरै सताउने गरेको पाइन्छ । तर कति’पयलाई गर्मी मौसममा पनि चायाँले
August 2, 2020 Administer बिज्ञान प्रबिधि, भिडियो, रोचक 14552
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229690)